Golaha Ammaanka ee QM oo wada shaqeyn ugu baaqay dowladda iyo maamul goboleedyada – Radio Baidoa
Golaha Ammaanka ee QM oo wada shaqeyn ugu baaqay dowladda iyo maamul goboleedyada
By Webmaster	 On May 30, 2020
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa qaraar kasoo saaray Xaalada Soomaaliya, waxaana ay walaac ka muujiyeen diyaar garow la’aanta doorashooyinka Soomaaliya, iyo sidoo kale wada shaqeyn la’aanta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda qaarkood.
Golaha Ammaanku wuxuu go’aamiyay in taageero dheeraad ah la siiyo Ciidanka AMISOM Muddo 9 bilood ah si ay taageeraan amniga hoganka doorashooyinka iyo sidoo kale taageeradda Ciidanka Soomaaliya ilaa 2021.
Waxaa uu sidoo kale ugu baaqay dowladda dhexe iyo maamulada Iskaashi deg deg ah si loo qabto doorasho lagu wada qanacsan yahay.
“Goluhu Isagoo ku celcelinaya baahida degdegga ah ee loo qabo in la sameeyo iskaashi buuxa oo dhexmara Dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka, Goluhu wuxuu ugu yeeray labada dhinac inay horumar dheeri ah ka sameeyaan xilliga kala guurka, isagoo ku booriyay inay qaadaan tillaabo la taaban karo oo ay ku fulinayaan tallaabooyinka mudnaanta leh ee lagu qeexay Nidaamka La-xisaabtanka Wadaagga ee 2019-ka. . Tallaabooyinka waxaa ka mid ah: gaaritaanka go’aan siyaasadeed oo loo wada dhan yahay oo ku saabsan wadaagidda awoodda iyo Kheyraadka; dib u soo celinta kulamadii caadiga ahaa ee Golaha Amniga Qaranka iyo dardargelinta qorsheynta farsamada iyo amniga ee doorashooyinka”
Warka kasoo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa kusoo beegmaya xilli Muddo Sanado ah aysan wax wadahadal ah yeelan maamulada Jubbaland, Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Mashaariicyo Kormeer lagu sameeyey Magaalada Marka(Sawiro)
Dadka uu ku dhacay Cudurka Corona Virus dunida oo gaartay 6,033,875 oo qof